कसरी कोभिड १ the ले ग्राहकको अनुभव परिवर्तन गरेको छ ईकमर्स समाचार
ईकॉमर्स समाचार | 01/10/2021 00:14 | वाणिज्य
महामारीको पहिलो दिन र हप्ता बाध्यकारी कम्पनीहरु महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू गर्न ग्राहक अनुभव को लागी। एक बर्ष भन्दा धेरै पछि, जोखिम को जोखिम संग अझै पनी उच्च छ र यस तथ्य को बावजुद कि टीकाकरण को प्रतिशत धेरै देशहरुमा उच्च छ, यी परिवर्तनहरु को धेरै बानी बनिसकेको छ।
र किनकि बानीहरु टाँसिन्छन्, खोपहरु संग पनि, धेरै उद्योगहरु भविष्य को लागी एक फरक दृष्टिकोण को सामना। त्यसोभए कसरी एक कम्पनी एक संसार को लागी त्यो ब्यालेन्स हुन सक्छ जुन पहिले नै परिवर्तन भएको छ? यहाँ कम्पनीहरु को लागी हेरिरहेका केहि सुझावहरु छन् दर्जी तपाइँको दीर्घकालीन ग्राहक अनुभव रणनीतिहरु.
1 अनलाइन ग्राहक अनुभव अँगाल्नुहोस्
2 व्यक्तिगत अनुभव recalibrate
3 दुबै संसारको सर्वश्रेष्ठ
अनलाइन ग्राहक अनुभव अँगाल्नुहोस्
चूंकि जीवन को धेरै अनलाइन परिवर्तन भएको छ र धेरै जसो यो भविष्य मा अनलाइन रहने सम्भावना छ, यो समय सुनिश्चित गर्न को लागी हो कि अनलाइन ग्राहक अनुभव अनुहार को अनुहार अनुभव को रूप मा एकै हेरचाह संग डिजाइन गरीएको छ।
कोभिड -१ Before भन्दा पहिले, धेरै पसलहरु स्टोर मा खरिद निर्णय गरे, उनीहरु के देखे, छुए, र शेल्फ मा तुलना मा आधारित उत्पादनहरु छनौट। नतिजा को रूप मा, कम्पनीहरु शेल्फ प्लेसमेंट योजनाहरु मा, स्टोर मा पदोन्नति, र बिक्री को बिन्दु को बिक्री व्यापार मा दृश्यता र बिक्री को लागी लगानी।
अब, धेरै मानिसहरु अनलाइन आदेश, त्यसैले सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया ग्राहकहरु को लागी फरक छ।
वितरण र पिकअप ग्राहकहरु को अनुभव को लागी नयाँ चरणहरु, र नयाँ मानिसहरु लाई जोडेका छन्। स्टोरहरु अब कर्मचारीहरु र ठेकेदारहरु ग्राहकहरु को लागी अर्डर राख्ने भरिएका छन्। यी खरीददारहरु हुन् गति र सटीक मा अधिक चासो बार्गेन्स भन्दा, त्यसैले तिनीहरू पदोन्नति द्वारा प्रभावित छैनन्। सबै खरीददारहरु यो चाहन्छन् उत्पादनहरु स्टक मा छन्, कि पहिचान गर्न सजिलो, स्पष्ट र सरल छन्।
व्यक्तिगत अनुभव recalibrate
त्यहाँ कुनै शंका छैन कि व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव महामारी बाट सबैभन्दा ठूलो प्रभाव प्राप्त भएको छ। र धेरै रिटेलरहरुको लागी, त्यो रिटेल अनुभव सधैं महत्त्वपूर्ण थियो। अब पनी यदि तपाइँ पसल मा जानुहुन्छ, यो हो एक एक्लो अनुभव र यो ब्रान्ड निर्माण को लागी धेरै फरक छ।
उपभोक्ताहरु जान्न चाहन्छन् कि एक कम्पनी उनीहरु को बारे मा ख्याल राख्छ, सबै अनिश्चितता कि अहिले अवस्थित दिईएको छ।
अझै पनी, यो सबै हात सेनिटाइजर र कुनै शैली हुन सक्दैन, विशेष गरी ब्राण्डहरु को लागी बलियो भावनात्मक अपील र जहाँ ग्राहक सेवा कम लेनदेन र अधिक सम्बन्ध को लागी हुन्छ। यी कम्पनीहरु मा विशेष गरी रचनात्मक हुनु पर्छ ब्रान्ड निर्माण.
दुबै संसारको सर्वश्रेष्ठ
सप्ताहन्त बजार जस्तै वरिपरि छडी ग्राहकहरु प्रयोग अनुभवहरु हुनेछन्? यो याद गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ कि एक लगातार परिवर्तन हुने वातावरण को मतलब सिक्ने र अनुकूलन को लागी लगातार अवसर हो।
अन्ततः, एक नयाँ पोस्ट कोविड वास्तविकता को धूलो बसोबास को रूप मा, संगठनहरु कि प्रयोग गरीयो आफ्नो निपटान मा धेरै उपकरणहरु हुनेछन्।
उदाहरण को लागी, शिक्षा लाई लामो समय देखि परिवर्तन को लागी एक प्रतिरोधी उद्योग को रूप मा देखीएको छ: शिक्षकहरु उनीहरुलाई पढाउन चाहने जानकारी निर्धारण, त्यो सामग्री सिकाउने दृष्टिकोण स्थापित गर्ने, र त्यसपछि कक्षामा बिद्यार्थीहरुलाई पुर्‍याउने। टाढाको शिक्षा को लागी पारी परिवर्तन भएको छ। प्रक्रिया मा, यो तरीकाहरु को लागी शिक्षकहरु र बिद्यार्थीहरु अन्तरक्रिया को लागी नयाँ संभावनाहरु प्रस्तुत गरेको छ।
सबैलाई चीजहरु गर्न को लागी उनीहरु कहिल्यै गर्न को लागी योजना गरीरहेछन् र के सिकेका छन् कि यो हो कि यी धेरै नयाँ प्रविधिहरु लाई तपाइँ चीजहरु गर्न को लागी पहिले कहिल्यै सम्भव थिएन की अनुमति दिनुहुन्छ - चीजहरु जुन धेरै तरीकाहरु मा कती धेरै राम्रो छ तपाइँ के गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ईकॉमर्स समाचार » वाणिज्य » कसरी कोभिड -१ the ले ग्राहकको अनुभव परिवर्तन गरेको छ
सुझावहरु तपाइँको कम्पनी को ग्राहक वफादारी रणनीति मा सफल हुन को लागी